हालसम्मकै ठूलो आईपीओमा आजबाट आवेदन खुल्यो, कसरी र कति कित्ता भर्ने ? – Aarthik Samachar
हालसम्मकै ठूलो आईपीओमा आजबाट आवेदन खुल्यो, कसरी र कति कित्ता भर्ने ?
काठमाण्डौ । हालसम्मकै ठूलो नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक लिमिटेडको आईपीओ आज शुक्रबार (माघ २ गते) देखि बिक्री खुला गरिएको छ।
सेयर निष्कासनकर्ता तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएल एस क्यापिटलका अनुसार नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक लिमिटेडका ८ करोड कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो। यो आईपीओमा छिटोमा माघ ६ गते र ढिलोमा माघ १६ गतेसम्म आवेदन दिन मिल्नेछ।
प्रतिकित्ता रु। १०० का दरले आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २ करोड कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटलले जनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरो सेयर पोर्टल तथा एपमार्फत पनि आईपीओमा आवेदन दिन सकिनेछ।